Warbixin Xiiso Leh”Galmudug xaggee u socotaa’? – KHAATUMO NEWS
Warbixin Xiiso Leh”Galmudug xaggee u socotaa’?
Xaaladda dhabta ah ee Galmudug ayaa waxay tahay in ay laba qaybood u qaybsantay, Xaaf oo dhinac ah iyo Ahlu Sunna oo dhinac ah, sidaas oo ay tahay ayaa go’aanka uu qaatay Xaaf wuxuu isku yaaciyey waraaqihii xukuumadda NN iyo Ahlu Sunna oo jeclaa Xaaf oo jooga Dhuusamareeb in uu ogolaado doorashada.
Taas badelkeeda Xaaf wuxuu soo saaray qoraal uu ku sheegayo in uu burburay heshiiskii isaga iyo Ahlu Sunnah u dhaxeeyey, Cadaado-na tahay Caasimadii Galmudug doorashadana la qabto 4.07.2019, waa talaabo siyaasadeed waraaqihii isku yaacisay xukuumadda NN.
Xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay Ahlu Sunnah waa koox diimeed cid walba isugu jirta deegaan weyn in kastay gacanta ku hayaan ciidan xooggana leeyihiin, hadana bulshada Galmudug ma wada matelaan, oo 11 qaybeed ee wax lagu qaybsado way ka duwan yihiin kana culus yihiin markay kaligood yihiin, waxay xilligan isu arkaan Ahlu Sunnah ragga ugu xoogga weyn ee nidaamsan ee ka jira deegaanka Galmudug.
Xukuumadda NN qoraalkan Xaaf soo saaray wuxuu hakinayaa wax badan oo ay markii hore u ogolaayeen Ahlu Sunnah, Cadaado oo doorashada lagu qabtaana waxay dani ugu jirtaa dad badan oo kala duwan, waxaase caqbad weyn iyana noqotay Xaaf oo dhawr arrimood wali gacantiisa ku jiraan oo la’aantood ay adag tahay in doorasho la qabto.
1. Magacaabista gudiga doorashada.
2. Iyo maadaama uu yahay madaxweynaha xilka uu hayo lagu tartamayo oo isaga ogolaan shihiisa la’aantii talaabo kasta oo la qaadaa ay Fawdo dhalin karto.
Labadaas qodob iyo haddii uu taageero ka helo Cadaado iyo Gaalkacayo oo xaaladdu sii murgi karto intaas waxaan ahayn Xaaf xilligan wuu rifan yahay, waxaase iyaguna qaabka ay arrimahan u maarayn lahaayeen dhibaato kaga imaanaysaa Ahlu Sunna oo doonaya In ay xilka qabtaan iyo xukuumadda NN oo aan xataa isku halayn karin Ahlu Sunna oo xilal culus iyo mashaariicba miiska u saaran yihiin, waxa kaliya ee mideynayeyna ay ahayd Xaaf sidii karkaar Loo weydaarin lahaa , sababtoo ah Ahlu Sunnah iyo xubno badan oo NN waa kala Caqiido dhinac walba laakiin siyaasadda dhinac waliba baray oo xilligii xabbada waxaa badelay xilligii Siyaasadda Mikifiiliyadda.
Safarka Khayre ee Dhuusamareeb iyo safarka xildhibaano badan ku tagayaan Cadaado waxay u yihiin daliil xaaladda cakiran oo aanay garanayn NN hadda dhinac ay ku aado oo dani ugu jirto, waxaase muuqata in waddo sadexaad ay quudaraynayaan taas oo ah in dib loo yagleelo Maamulka Galmudug oo dib u heshiin iyo shir beeleed la abaabulo, si looga gudbo awoodaha wali gacanta Xaaf ku hadhay iyo Awooda iyo saamaynta Ahlu Sunnah.
Previous Post: Deg Deg:Dhakhtar Caan ka Ahaa Soomaaliya Oo Geeriyooday
Next Post: Deg Dg Daawo:Xog waran xaalada Itobiya wararkii u dambeeyay waraysi